भाग 1 को कारण
सत्तारूढ अभिजात वर्गहरु अझै पनि पुरातात्विक स्वामित्व को मालिक थिए, तर केहि नागरिक सेवा मा भूमिहीन थिए। कुलीनहरूले राज्य ब्यापारी चलाए र सामान्य जनसंख्या भन्दा माथि बसे। अन्य देशहरूको विरूद्ध एलियता र लडाकुहरूले झारमा राखेका थिए र उनीहरूको लागि कुनै प्रतिबन्ध कहिल्यै बनाएनन्। रूससँग सिविल सेवाको एक सख्त सेट थियो, रोजगार, वर्दी आदि, जहाँ उन्नति स्वचालित थियो।
बिरालोपन कमजोर र असफलता थियो, आधुनिक संसारमा अनुभव र अनुभवहरू गुमाउनुपरेको छ, तर मानिसहरूलाई ती कौशलहरूसँग अनुमति दिन इन्कार गर्दथ्यो। यो प्रणाली एक विवादास्पद, सामारवादी विभाजन र शासन र तीव्र ईर्ष्याको भित्ता भरिएको थियो। कानुनले अन्य कानुनमाथि विजय प्राप्त गर्यो, जाजरले सबैलाई ओभरराइड गर्न सकेन। बाहिर बाहिर यो मनमाने, पुरातन, अपूर्ण र अनुचित थियो। यसले बिद्यार्थीलाई पेशेवर, आधुनिक, कुशल बनाउन वा मध्ययुगीन खोज राजाको रूपमा काउन्टरबाट रोक्न रोक्यो।
रुचाउँदा रूसले यो जस्तै भएको थियो। कारागार युद्ध पछि पश्चिमी सुधारको माध्यमबाट राज्यलाई बलियो बनाउन पेशेवर नागरिक सेवकहरूले 1860 को महान सुधारको उत्पादन गरे। यसमा 'फ्रीफाइ' समावेश गरिएको छ (क्रमबद्ध) को रूपमा (क्रमबद्ध) र 1864 मा जेमिस्टोभहरू सिर्जना गरेका छन्, धेरै क्षेत्रहरूमा स्थानीय असेंबलीहरू महानगरीयहरू, जसले यसको प्रतिबन्ध लगाएको छ, र प्रायः धेरै काम गरे।
1860s उदारवादी थिए, सुधारका समयहरू। उनीहरु वेस्टर्न तिर रुसको नेतृत्व गर्न सक्थे। यो महँगो, कठिन, लामो समयसम्म हुनेछ, तर मौका थियो।
यद्यपि, प्रजातन्त्रहरूलाई प्रतिक्रियामा विभाजित गरियो। सुधारवादीहरूले समान कानुन, राजनीतिक स्वतन्त्रता, एक मध्यम वर्ग र कामकाजी वर्गका अवसरहरू स्वीकार गरे।
संविधानको लागि कल अलेक्जेंडर द्वितीयले सीमित गर्न आदेश दिए। यस प्रगतिको प्रतिद्वंद्वीले पुरानो आदेश चाहियो, र सेनामा धेरै भन्दा बनाइयो; तिनीहरूले स्वतन्त्रता, सख्त आदेश, महानगरीय र चर्चलाई शक्तिशाली सेनाको रूपमा (र पाठ्यक्रमको सेना) को माग गरे। त्यसपछि अलेक्जेंडर द्वितीयको हत्या भयो, र उनका छोराले यसलाई बन्द गर्यो। काउन्टर सुधारहरू, नियन्त्रण गर्न केन्द्रीकरण गर्न, र tsar को व्यक्तिगत नियम बलियो पछि। अलेक्जेन्डर II को मृत्यु बीसौं शताब्दीको रूसी त्रासदीको सुरुवात हो। 1860 का मतलब रूसले मानिसहरूलाई सुधार चढाएका थिए, यो गुमाए र ... क्रांति खोज्यो।
शाही सरकारले आठौं प्रांतीय कैपिटलहरूको तर्फबाट भाग्यो। त्यसो भए कि किसानले यसको आफ्नै मार्गमा भाग्यो, माथि उल्लेखित कुलीनहरूमा। लोकतान्त्रिक शासित शासन र पुरानो शासन सबै देखेर दमन देखेर अति बलियो थिएन। पुरानो सरकार अनुपस्थित थियो र सम्पर्कबाट बाहिर थियो, सानो संख्यामा पुलिस, राज्य अधिकारीहरू, जसलाई राज्य द्वारा अधिक र अधिक को लागी सहभागी भएको थियो किनकि केहि अन्य थिएन (तत्काल चेक सडकका लागि)। रूससँग सानो कर प्रणाली, खराब संचार, सानो मध्यम वर्ग, र एक सरफाई थियो जुन चार्जमा अझै पनि मालिकको मालिक संग भयो। केवल धेरै धीरे-धीरे जाजरको सरकार नयाँ नागरिकहरू भेट्थे।
Zemstvos, स्थानीयहरु द्वारा चलाईएको, कुञ्जी बनाइयो। राज्य भूकम्पको महानगरमा बसे, तर उनीहरूले पछाडी पोस्ट स्वतन्त्रतामा थिए, र औद्योगिक र राज्य सरकारको विरुद्धमा आफूलाई बचाउन यी साना स्थानीय समितिहरू प्रयोग गर्थे। 1905 सम्म यो एक उदार आंदोलन थियो जुन सुरक्षा व्यवस्था र प्राविधिक समाजको लागि बलियो बनाउछ, जस्तै कि किसान बनाम भूकम्प, अधिक स्थानीय शक्ति, एक रूसी संसद, एक संविधान। प्राविधिक महानता मजदुरहरू थिएनन्, श्रमिकहरू।
यो रूसी सेनाले मानिसको सबैभन्दा ठूलो समर्थक हुनुको बावजूद, Tsar को विरुद्ध तनावहरु भरिएको थियो। पहिला यो हराएको (क्रिमिया, टर्की, जापान) र यो सरकारमा दोषी थियो: सैन्य व्यय अस्वीकार भयो। जस्तै औद्योगिककरण पश्चिममा उन्नत थिएन किनकी, रूसले नयाँ तरिकामा गरीब प्रशिक्षित, लैजानुपर्छ र आपूर्ति गरीयो र गुमायो।
सिपाहीहरू र आफैले सचेतक अफिसहरू निराश हुँदैछन्। रूसी सैनिकों Tsar को लागु गरे, राज्य नहीं। इतिहास रूसी अदालतका सबै पक्षमा डुबेर उनीहरूले थोरै विवरणहरू जस्तै बटनहरू, आधुनिक संसारमा गुमाएका साम्य सेनालाई फिक्सन गर्दैनन्।
साथै, विद्रोहीहरूलाई दमन गर्न राज्यपालहरूलाई समर्थन गर्न सेनालाई थप प्रयोग गरिँदै थियो: तथापि निम्न तथ्याङ्कका तथ्याङ्कहरूले किसानहरू पनि थिए। सेनाले नागरिकहरूलाई रोक्न मागमा भङ्ग गर्न थाले। त्यो सेनाको अवस्था पहिलेको थियो जहाँ मान्छेहरू सर्फको रूपमा देखा पर्यो, अफसोसहरूले उप नागरिक दासहरू। 1917 मा, थुप्रै सैनिकहरूले सरकारको अधिकृत सेनाको सुधार चाहन्थे। तिनीहरू माथि नयाँ पेशेवर सैन्य पुरुषहरूको समूह थिए जसले प्रणालीको माध्यमबाट गल्ती गरेकी थिईन्, तीब्रिक प्रविधिबाट हतियार आपूर्ति गर्न, र प्रभावकारी सुधारको माग गर्यो। तिनीहरूले अदालत र शारदलाई रोक्न देखाए। तिनीहरूले 1917 को सुरुमा रुसी परिवर्तन गर्थे जुन सम्बन्धको सुरुवात, डोमलाई एक आउटलेटको रूपमा बदले। शारारले आफ्नो प्रतिभाशाली पुरुषहरूको समर्थन गुमाए।
एक बाहिर टच चर्च
रुसीहरू ओर्थोडक्स चर्च र ओर्थोडोक्स रूसको रक्षा र एक राज्यको सुरुवातमा सुरु भएको एक मिथक मिथकमा संलग्न थिए। 1900 मा यो यो माथि र अधिक बलियो थियो। सागरले राजनीतिक-धार्मिक आकृतिको रूपमा पश्चिमको वरिपरी विपरीत थियो र उनी चर्चको साथ लुटिन र साथसाथै कानूनोंसँग नाश गर्न सक्थे। चर्च धेरै अनौपचारिक किसानहरूलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक थियो र पूजाहारीहरूले शेरको आज्ञा पालन गर्न र प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्न र प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्न थाल्थे।
तिनीहरूले सजिलैसँग अन्तिम दुई सार्सहरूसँग सहयोग गरे जसले मध्ययुगीन समयमा फर्किनु चाहन्थे।
तर औद्योगिककरणले किसानहरुलाई धर्मनिरपेक्ष शहरहरूमा पुर्याइरहेको थियो, जहाँ चर्चहरू र पूजाहारीहरूले ठूलो विकास पछि ढल्यो। चर्चले शहरी जीवन र एक बढ्दो संख्याका पुजारीहरूलाई यो सुधारको लागि भनिन्छ (यो राज्य र पनि राज्य)। लिबरल पादरीहरू केवल साम्राज्यको सुधारलाई सम्भवतः झारबाट टाढा टाढा जान्छन्। समाजवादले के गर्ने कामदारहरूलाई नयाँ आवश्यकताहरू पुरानो थियो, पुरानो ईसाई धर्म होइन। किसानहरू पूजाहारीहरू र उनीहरूको कामका साथ कुटपिट गरेका थिएनन्, घमण्डको समय झिक्यो र थुप्रै पुजारीहरू कमजोर भए र बुझिरहेका थिए।
एक राजनीतिक सभ्यता समाज
सन् 1890 सम्म रूसले एक शिक्षित, राजनैतिक संस्कृति विकास गरेका थिए जुन मानिसहरूको समूहको बीचमा अझ धेरै पर्याप्त थिएन जुन वास्तवमा एक मध्य क्लास भनिन्छ, तर ती व्यक्तिहरु र संस्कार र किसानहरु बीचको निर्माण गर्दै थिए। यो समूह एक 'नागरिक समाज' को भाग थियो जुन उनीहरूको युवाहरू विद्यार्थी हुन, अखबारहरू पढ्नुहोस् र सागरको भन्दा सार्वजनिक सेवा तिर हेर्दै हेर्छन्। सन् 1980 को दशकमा एक गम्भीर लयको घटनाले उनीहरूको सामूहिक र कट्टरप्रायवादीको अस्तित्वमा उनीहरूको सामूहिक क्रियाकलापलाई उनीहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ कि उनीहरूले शार्ववादी सरकारलाई कस्तो प्रभाव पारेको थियो र उनीहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्न अनुमति प्राप्त गर्न सक्थे। जिमस्टोभका सदस्यहरू यी मध्ये मुख्य थिए। जबररले उनीहरूको माग पूरा गर्न अस्वीकार गरे, यस सामाजिक क्षेत्रको धेरैले उनको र उनको सरकारको विरुद्ध गर्यो।
राष्ट्रीयता उन्नीसवीं शताब्दीको अन्तमा रूस आए र नर्स सरकार र न्युयोर्क विपक्षीले यसको सामना गर्न सकेनन्।
यो समाजवादी थिए जसले क्षेत्रीय स्वतन्त्रतालाई धक्का दिए, र समाजवादी राष्ट्रवादीहरूले विभिन्न राष्ट्रवादको बीचमा राम्रो काम गरे। केही राष्ट्रवादीहरूले रूसी साम्राज्यमा रहन चाहन्थे तर अधिक शक्ति पाउँछन्; सागर यसलाई मुद्रास्फीति गरेर र रसिफाइ गरेर सांस्कृतिक आन्दोलनलाई घृणित राजनैतिक विरोधमा राखे। सार्सले सधै रुसमा राखेका थिए तर यो अब धेरै खराब थियो
दमन र क्रांतिवाद
1825 को डेमब्रिस्ट विद्रोहले तेर निकोलस म, जसमा एक प्रहरी राज्यको निर्माण समेत गरेको छ। सेंसरशिप 'तेस्रो सेक्शन' सँग जोडिएको थियो, अन्वेषकहरूको समूहले राज्य विरुद्धको कार्य र विचारहरू खोज्दै, साइबेरियाका संदिग्धहरूलाई निर्वासित गर्न सकेन, केवल कुनै पनि अपराधको दोषी छैन, तर यो मात्र यसको संदेह हो। 1881 मा तेस्रो सेक्शन ओखानका बन्यो, सबै ठाउँमा एजेन्टहरू प्रयोग गरी युद्ध लड्ने गुप्त प्रहरीले, क्रांतिकारहरू पनि सम्बोधन गर्दथे। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी बोक्सेविकहरूले आफ्नो पुलिस अवस्था विस्तार गरे, रेखा यहाँ सुरु भयो।
यस अवधि को क्रांतिकारीहरु लाई कठोर सारिरी कैदहरुमा, चरमवाद मा कठोर, कमजोरी कमजोर भयो। तिनीहरूले रूसको बौद्धिक, पाठक, विचारक र विश्वासीहरूको वर्गको रूपमा सुरू गरे र केहि रङ्ग र अँध्यारोमा परिणत भयो। सन् 1820 को डेमब्र्रिस्टबाट यो व्युत्पन्न, रूसमा नयाँ अर्डरको पहिलो विरोधी र क्रान्तिकारीहरू र सफल पीढ़ीहरूमा बौद्धिकहरूलाई प्रेरित गरियो। अस्वीकृत र आक्रमण गरे, हिंसा र हिंसात्मक संघर्षको सपनाहरू बदले उनीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। बीसौं शताब्दीमा आतंकवादको एउटा अध्ययन यो ढाँचा दोहोरो छ। एउटा चेतावनी त्यहाँ थियो। यस तथ्यले गर्दा पश्चिमी विचारधारा जो रूसमा लीक भएको थियो त्यो नयाँ संवेदनामा भागेको अर्थ उनीहरूले शक्तिशाली कुकुरमा विकृत हुनुको सट्टामा बाहेक अन्य टुक्राहरु तिर तर्क गरे। क्रान्तिकारीहरूले मानिसहरूलाई हेर्छन्, जुन तिनीहरू प्रायः माथि जन्माइएको थियो, आदर्श, र राज्य, जसलाई उनीहरूले गल्ती गरेका हुन्छन्। तर बौद्धिकहरूसँग किसानहरूको कुनै वास्तविक अवधारणा थिएन, मानिसहरूको सपना मात्र, एक अमूर्त जसले लेनिन र साम्राज्यवादलाई कम्पनी बनायो।
क्रान्तिको सानो समूहको लागि शक्ति गुमाउन र एक क्रांतिकारी तानाशाह बनाउनुको लागि बारीमा एक समाजवादी समाज (शत्रुहरू हटाउने) 1910 को दशक भन्दा अघि नै थिए, र 1860 को यस्तो विचारहरुको लागि सुनको उमेर थियो; अब तिनीहरू हिंसक र घृणित थिए। तिनीहरूले मार्क्सवाद को चयन गर्न पर्थ्यो। धेरै भन्दा पहिला थिएनन्। 1872 मा जन्मे, मार्क्सको राजधानी उनीहरूको रूसी सेंसरद्वारा सफा गरिएको थियो किनभने उनी खतरनाक हुन बुझ्न गाह्रो भए, र एक औद्योगिक राज्यको बारेमा रूस थिएन। तिनीहरू धेरै गलत थिए, र यो एक तुरुन्त हिट थियो, यसको दिनको उत्सव - बुद्धिमानीहरूले भर्खरै एक लोकप्रिय आन्दोलन देखाएको थियो, त्यसैले तिनीहरू मार्क्सलाई नयाँ आशाको रूपमा बदले। अधिक जनसंख्या र किसानहरू, तर शहरी कर्मचारीहरू, नजिक र बुझ्न योग्य। मार्क्स समझदार, तार्किक विज्ञान जस्तो देखिन्छ, कुकर्म, आधुनिक र पश्चिमी छैन।
एक जना युवक, लेनिन , एक नयाँ कक्षामा फेंकिएको थियो, एक वकील हुनु र क्रांतिकारी हुनु, जब उनको बुबालाई आतंकवादको लागि क्रियान्वित गरिएको थियो। लेनिन विद्रोहमा उभियो र विश्वविद्यालयबाट हटाइयो। उनी रूसको इतिहासमा अन्य समूहबाट पूर्ण रूपमा क्रांतिकारी बन्न पुगेका थिए जब पहिले उनले मार्क्सको सामना गरे, र उनले रूसको लागि मार्क्स लेखेका थिए, अर्को राउन्ड राउन्ड। लेनिनले रूसी मार्क्सवादी नेता प्लेखानोभको विचार स्वीकार्नुभयो, र तिनीहरूले शहरी मजदुरहरूलाई भर्खरै अधिकारको लागि हड्तालमा सामेल गरिन्। जस्तै 'कानूनी मार्क्सवादी' एक शान्तिपूर्ण एजेन्डालाई धकेलियो, लेनिन र अरूले क्रांतिको प्रतिबद्धताको साथ प्रतिक्रिया व्यक्त गरे र जसरीवादी पार्टीको विरोध गरे, कडा रूपमा संगठित भयो। तिनीहरूले सदन को आदेश को लागि अखबार इस्करा (स्पार्क) को मुखस्पति को रूप मा बनाए। सम्पादकहरू लेनिन समेत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीको पहिलो सोवियत थिए। उनले लेखे के गरिसकेका छन्? (192 9), एक हेक्टरिंग, हिंसात्मक कार्य जसले पार्टीको स्थापना गर्यो। सोशल डेमोक्रेट दुई समूह, बोल्स्किविक्स र मेन्सिभिक्सले 1939मा दोस्रो पार्टीको कांग्रेसमा विभाजन गरे। लेनिनको तानाशाही दृष्टिकोणले विभाजनलाई पराजित गर्यो। लेनिन एक केन्द्रीय व्यक्ति थिए जसले मान्छेलाई यो अधिकार प्राप्त गर्न असम्भव गरे, एक विरोधी लोकतान्त्रिक, र उनी बोल्सेविक थिए तर मध्य वर्गका साथ काम गर्न मिन्सिभिकहरू तयार थिए।
विश्व युद्ध 1 उत्प्रेरक थियो
पहिलो विश्वयुद्धले 1917 को रूसको क्रांतिकारी वर्षको लागि उत्प्रेरक प्रदान गर्यो। युद्धले आफैले सुरुदेखि खराब हुँदै गयो, 1915 मा सागरलाई व्यक्तिगत चार्ज लिन को लागी प्रहार गरे, जो कि उनको कंधेमा विफलताको अर्को साता पूर्ण जिम्मेवारी थियो। अझ धेरै सैनिकहरूको लागि वृद्धि बढ्दो रूपमा, किसान जनसंख्या युवा र घोडाको रूपमा गुस्सा बढ्यो, युद्धका लागि आवश्यक दुवै, हटाइयो र उनीहरूको जीवनको क्षतिलाई हानिकारक रकम कम गर्न। रूसको सबैभन्दा सफल खेत अचानक आफ्नो श्रम र सामग्री फेला पारेको युद्धको लागि हटाइयो, र कम सफल किसानहरू आत्म-अप्ठ्यारोसँग बढी चिन्ताग्रस्त भए र अल्पसंख्यक बिक्रीको सम्बन्धमा पहिले नै भन्दा कम हुन्थ्यो।
मुद्रास्फीति भयो र मूल्यहरू गुलाब भयो, त्यसैले भोटेको बोसो भयो। शहरहरूमा, कर्मचारीहरूले आफूलाई उच्च मूल्यहरू बर्दाश्त गर्न सकेनन्, र सामान्य वेतनका लागि सामान्यतया स्ट्राइकहरूको लागि उत्प्रेरित गर्ने प्रयत्न गर्दछन्, प्राय: स्ट्राइकहरूको रूपमा उनीहरूले रूसलाई बेइमानीको रूपमा ब्रान्ड देखाए। विफलता र गरीब व्यवस्थापनको कारण ट्राफिक प्रणाली रोकिएको छ, सैन्य आपूर्ति र खानाको गति रोक्न। त्यसोभए सिपाहीहरूले छोडेनन् भने सेनाले कस्तो मात्रामा आपूर्ति गरेको थियो, र अगाडि अगाडि असफलताको पहिलो हात खरिद गर्यो। यी सैनिकहरू, र उच्च आज्ञा जसले पहिला तारलाई समर्थन गरेको थियो, अब उनीहरूले असफल भएनन्।
एक बढ्दो हानिकारक सरकारले स्ट्राइकरहरूलाई रोक्न सेनाको प्रयोग गर्न थाले, जसले शहरमा ठूलो विरोध र सेनाको विद्रोहीको कारणले सैनिकहरूले आगो खोल्न इन्कार गरे। एक क्रांति सुरु भयो।
पोल पोट, कम्बोडिया को कसाई
किन चीनले हङकङलाई बेलायतमा पियो?
विलियम वालेसको जीवनी
डायना, वेल्स को राजकुमारी - टाइमलाइन
वाइकिंग्स हॉर्नड हेलमेट पहन्यो?
पर्ल स्ट्रिंग लम्बाई () प्रकार्य
के तपाईं भान्सा गाईको बारेमा जान्न आवश्यक छ
लिजिडी बोर्डेनको जीवनी
बैटमैन हेलोवीन पोशाकको विकास
प्रस्ताव मा "उपयोग" को उपयोग
विद्यार्थीहरूलाई टेबलाउ परिचय दिँदै
वॉलीबल ब्लक मास्टर कसरी गर्ने
के तपाई एक्स एक्स रे मेटल गर्नुहुन्छ भने?
परिभाषा र अंग्रेजी मा एलियन को उदाहरण
शीर्ष 10 टोनी बेनेट गीतहरु
डायनासौर र मेस्चुसेट्स को प्रागैतिहासिक पशु
PTSD को बारे मा सर्वश्रेष्ठ र Worst युद्ध सिनेमा
खगोल विज्ञान 101: स्टाररी आँखा? Stargazing प्रयास गर्नुहोस्
कोनेट्स - सिंकहोल्ड्स मा माया अन्डरवर्ल्ड को यो Yucatan प्रायद्वीप मा
उच्च उत्तरी क्यारोलिना कलेजहरूमा प्रवेशको लागि एसएटी स्कोरहरू
नक्कली रक्त र गेट हेलोवीन पकाउने
केही चीजहरू तपाईंले देशको बारेमा थाहा छैन
5 प्रसिद्ध अरबी अभिनेता: उमर शरीफ देखि सामा हेके